I-German, Germany Inkampani engiyisebenzelayo ifuna izisebenzi. - EJALIMANE
Inkampani engiyisebenzelayo ifuna izisebenzi.
« : Ngo-Ephreli 27, 2016, 04:32:45 pm »
Uma uhlala eSulzbach-Rosenberg noma ezindaweni ezakhelene nayo, usizo lunikezwa abangane abadinga usizo.
Imininingwane mayelana nomsebenzi:
Uma uqala ngeLeihfirma, uma inkampani ingakulandi ngqo, isizathu ukuthi abafikayo bashiye umsebenzi ngakusasa. Ungacabangi ukuthi ngeke bayithole, imvamisa bayithola kungakapheli izinyanga eziyi-9, basanda kuthola abantu abathathu, futhi ngilindele ukuthi ibe ngu-3 ngenyanga yesi-5.
Umqondo womsebenzi wakho ukwahlukanisa izingxenye zemoto (i-spark plug-lining, njll.) Esimweni esivela kutheyipu elula ngokusho kwenombolo yekhasimende. Awekho amacala ambalwa kuphela, kwesinye isikhathi amacala ayi-100-200, kwesinye isikhathi amacala angama-500-600.
Ekuqaleni, uma umholo wakho wehora ungama-9 Euro, uma inkampani ikuthatha, iqala kusuka ku-12 bese iqala ukwanda ngokuya ngonyaka.
Udinga nje ukukhuluma isiJalimane esincane. Isidingo esibaluleke kakhulu ukuthi irekhodi lakho lobugebengu lihlanzekile.
Abangane abafuna umsebenzi kodwa abangawutholi, bangacabanga kanjalo.